समाचार - के तपाईंले मोटरसाइकल विन्डशील्ड किन्नु पर्छ?
के तपाईंले मोटरसाइकल विन्डशील्ड किन्नु पर्छ?
यो व्यावहारिक छ!
व्यावहारिक घट्ने हावा विस्फोटले राइडिंग थकान कम गर्दछ। यो सजिलो छ। चाहे यो लामो आइतवार क्रूज हो वा एक हप्ता लामो यात्रा, सतर्क रहनु र काठीमा राम्रोसँग कन्डिशन्ड राख्नु तपाईलाई एकै टुक्रामा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न मद्दत गर्दछ।
जटिल मौसममा, एक विन्डशील्डले तत्वहरूबाट बृद्धि आराम र सुरक्षा प्रदान गर्दछ। तपाईं पानीमा भिजेको आशामा सवारी गर्नुहुन्न, वा चिसो मौसममा हिमपातको आशामा सवारी गर्नुहुन्न। मौसममा सवारी प्रबन्ध गर्न तपाईं विन्डशील्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ जुन अन्य सवारहरूलाई घर भित्र राख्छ।
यसले तपाईंको अनुहार पनि सफा राख्छ!
यो अफरफ्याडेबल हो!
सस्तो त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो बाइकमा थप्न सक्नुहुनेछ तपाईंको सवारीको आनन्द बढाउन वा तपाईंको बाइकको बहुमुखी प्रतिभा वा प्रदर्शन सुधार गर्न।
एक विन्डशील्ड एक कम लागतको लगानी हो जसले ठूलो लाभांश दिन्छ, किनकि यसले निश्चित रूपमा तपाईंको सवारी अनुभवलाई सुधार गर्दछ। एक उच्च-अन्तको विन्डशील्ड प्रणाली पनि, निलम्बन अपग्रेड, निकास प्रणाली वा ईन्जिन प्रदर्शन कार्यको तुलनामा सानो लगानी हो।
वास्तवमा, विन्डशिल्डहरू धेरै सस्तो हुन्छन् जुन तपाईं आफ्नो मोटरसाइकलको दिन प्रतिदिन क्षमता वृद्धि गर्न दुई फरक आकारहरू वा शैलीहरू किन्न सक्नुहुनेछ।
पोष्ट समय: मे २ 25-२०२०
फिचर गरिएका उत्पादहरू - साइटम्याप Vespa Gts Gtv 300 Schoolbag र्याक, होंडा Nmax विन्डशील्ड, मोटरसाइकल ग्यास पेडल, Vespa Gts 300 Gtv लगेज र्याक, फ्ल्याट मोटरसाइकल पेडलहरू, कावासाकी स्कूलब्याग र्याक,